वि`श्वका लागि सु`खद खबर ,कोरोना भाइरस आफै कम`जोर बनेर छिट्टै हट्ने संकेत !! पुरा पढ्नुहोस ! – Eshankharapur
मुख्य पृष्ठ /Corona (COVID-19) Updates/वि`श्वका लागि सु`खद खबर ,कोरोना भाइरस आफै कम`जोर बनेर छिट्टै हट्ने संकेत !! पुरा पढ्नुहोस !
कोरोना भाइरसबाट पीडित विश्वका लागि एक आशाको किरण भाइ`रस आफैले लिएर आएको छ । अमेरिका`को एरिजोनामा वैज्ञानिकले कोरोनाको सार्स–कोभ–२ भाइरस`मा एउटा यस्तो अनौठो म्युटेशन (बदलाव) र जेनेटिक प्या`ट्रन पत्ता लगाएका छन्, १७ वर्ष पहिलो सार्स भाइरसको संक्र`मणको समयमा यस्तै म्युटेशन देखा परेको थियो ।
यो परिवर्तन भाइरस प्रोटिनको ठूलो हिस्सा अर्थात् यसको जेनेटिक मेटरियल आफै गायब हुनु हो । वैज्ञानिक यसकारण उत्साहित छन् किनकी यस्तो परिवर्तन देखिएका ५ महिनाभित्रै सार्सको संक्र`मण सकिएको थियो । त्यसैले कोरोनाको यो संकेत उसको कमजोरीको कारण बन्नसक्ने भन्दै वैज्ञानिकहरु उत्साहितछन् ।
कुनै स्थान वा वातावरण वा अन्य कारणले कुनै भाइरसको जेनेटिक संरचनामा हुने परिवर्तनलाई म्युटेशन भनिन्छ । अनुस`न्धानका दौरान शोधकर्ताहरुले गणितिय नेटवर्क एल्गोरिदमको सहयोग`बाट भाइरसको संर`चनाको अध्ययन गर्छन् । काउन्सिल अफ साइ`न्टिफिक एन्ड इन्डस्ट्रियल रिसर्चका विशेषज्ञ डाक्टर सीएच मोहन रावका अनुसार भारतमा कोरोना भाइ`रस सिंगल म्युटेशनमा छ ।यसको अर्थ यो चाडैं समाप्त हुने संभावना छ । तर, यदी भाइरसले बारम्बार रुप बदल्यो भने खतरा अझै बढ्नेछ र भ्याक्सि`न बनाउन पनि चुनौती हुनेछ ।